Maxaad Shirib ka taqaan? Q:1AAD | Berberanews.com	Home
Tuesday, June 19th, 2012 | Posted by admin Maxaad Shirib ka taqaan? Q:1AAD
Suugaan waa eray kulmiyana: hawraar kastoo hannaan, habdhac iyo heenso u gaara leh. Suugaannna asal ahaan waxay ka timaaddaa hadal, hadalkana waxaa loo kala saaraa: Tix iyo Tiraab ama Hawraar iyo Hal abuur. Maansadu waxay u kala baxdaa qaybo badan, sida: Gabay, Guuroow, Geeraar, Jiifto, Shirib, Masafo, Saar, Buraanbur, Hees, oo dhawr nooca ah, Hees Hawleed, Hees Ciyaareed, Hees Carruureed iyo Heesaha cusub, ee iminka lagu xareediyo. Suugaanta waxaa kale oo ka mid ah Maahmaahda, Murtida, Halxiraalaha iyo Hawraaraha Halqabsiga ah, ee sida joogtada ah loo adeegsado mid walba xilligeeda iyo xuskeeda gaarka ah lagu xusho.
Suugaan wuxuu Abwaan Maxamed Ibraahin Warsame “Hadraawi” Maansadii “Sirta Nolosha” ku fasiray: “Suugaantu Gogol weeye” tuducdan ayaa waxay qeexday suugaani inay tahay gogol, gogolina ay tahay wax aan laga maarmin, haddana aan koobnayn oo fidsan. Tusaale: Dhulku waa gogol, korkiisa waxa saaranina maaha wax aragti, ogaal iyo aqoonba lagu koobi karo, sidaa awgeed, waxaa inoo caddaanaya in erayga Suugaani la mid yahay Dhulka, oo dhulka waxaa oogadiisa saaran aan maan lagu koobi karin, Murtiyada kala duwan ee Tix iyo Tiraabba leh ama Hadal iyo Hawraarna loo adeegsado, badideedu inay isugu biyo shubanayso dedan iyo daalacanba Suugaan.
Haddii Suugaani sidaa tahay, waa wax aan laga maarmi karin, oo ku salaysan Aadanaha noloshiisa, afkeey doonaan ha ku hadlaane, qoloba si ha u unkatoo ha u lahaato meerisyo ka duwan kuwa qolyaha kale, isaguna imaanaya hadal murtiyeysan, oo dhumuc iyo dhadhan gaar ah leh, ujeedkooda iyo dulucdooduna ha kala duwanaatee waxaa lagu tilmaama afkeena Soomaaliga af suugaan hodan ku ah. Gabaygu waa Boqorka ama Kuruska baarkiisa ugu sarreeya suugaanta, waxaa bah wadaag la ah Gabayga Guuroowga, labadooduba waxay ka siman yihiin Hojiska iyo Hooriska oo aan tixleyda kale la wadaagin, waxayse ku kala duwan yihiin luuqda iyo dhawaqa, inta badan xeeldheerayaasha suugaantu waxay sheegaan inaysan jirin wax badan oo u dhaxeeya labadooda. Gabaygu dhisme ahaan miisaankiisa waxaa lagu saleeyaa inta u dhaxaysa 19 ilaa 23 alan, waase lagu kala aragti duwan yahay miisaanka Gabaygee, aan intaa uga kaaftoomo.
Hooyala hooyalayeey hoyalayeey hooye, Alla hooye hooyalayeey hoyalayeey hooye aqriste, bal aan kuu tusaaleeyo labadan meeris oo midna yahay gabay midka kalana guuroow yahay. Aan ku billaabo gabaygee, Abwaan Faarax Shuuriye ayaa ku gabyey:
Ninkii xalayto soo dheelmadaan dhowr hal leeyahaye: Bal dhallaanka wada booyayiyo araddii baa dhii leh
Marti soo dhowoo naga rabtiyo duco inay dhaafto Intaas oo dhan baad wada dhacdaye dhimo ha noolaane Inta Luxud laguu soo dhigdhigo la isku kaa dhaabye
Goortaas kula dhaqaaq oo ku gee dhumucii Naareede Ilaahayna kugu dhugay oo tay iskaga dhaafye
Dhimo oo ha noolaan shay nimaad dhaafisaan ahaye. Guuroowganna waxaa tiriyey Abwaan Maxamed Gacal Xaayoow waxaa la yidhaahdaa “Farshaxan” waana sidan:
Fiintina ma ciyin fooridina layma maqashiine Anigoo aleeshii firdhiyey sooma faalaline Meeshay ku sii foorartee foodda loo geliyey
Geed Mayrax laga fiiqo iyo feerashada Cawga Aqal faraqa weyn iyo aroos fiidkii lagu hooyo
Diyaaraadka faandoomka iyo filiqa neebaalka Maan farshaxanka lagu dhiirigelin fillanba maydaane
select	Short URL: http://www.berberanews.com/?p=17450
Posted by admin on Jun 19 2012. Filed under Fanka iyo Sugaanta.